Oluhlabayo sonwele ekwakheni oluhlaza
Uhlu olunzulu of AmaConifers, elisetshenziswa ukudweba, omunye isikhundla okuholela elalihlala sonwele. Uhlobo lwe kungokwalabo umndeni ngesihlahla sonwele saseYurophu emi-Pine futhi kuhlanganisa mayelana 50 zilwane, ngokwemvelo ezikhulayo eNyakatho Yurophu, eMelika ePhakathi North-East Asia, China naseNyakatho Melika.
Omunye ezisetshenziswa kakhulu ukwakhiwa kwezinhlobo oluhlaza lokhu uhlobo lwe kuyinto sonwele oluhlabayo. Lesi sihlahla esihle emide emincane, undemanding ukuba izimo ezikhulayo, eziqinile futhi amelana komoya. Ngokusho yakamuva sibalo fir oluhlabayo aphakeme amalungu amaningi omkhaya, yena bayakwazisa abalungisa emhlabeni wonke.
Emvelweni, lesi sitshalo iphila floodplains futhi nemithambeka ikakhulukazi ezindaweni entshonalanga yeNyakatho Melika. kutshalwa ngempumelelo emazweni eYurophu Ephakathi, eRussia nakwamanye izifunda nge sezulu esipholile.
Hlobisa oluhlabayo ukukhanya-edinga Ngakho-ke, utshaleke evulekile ezindaweni libalele. Isiko ngempela olindele ku wenzalo inhlabathi, kodwa akusho ahlupheke substrates ngokungadingekile ewufunzwa; Uthanda umswakama, kodwa awukwazi ukubekezelela waterlogging. Isiza kokwehla yayo kumele kahle akhanywa, ngisho emazingeni aphansi komhlaba.
oluhlabayo sonwele iyaphendula kahle izihlahla. Eminyakeni yokuqala yokuphila isihlahla zingase zimiswe ngokususa abasha efihlekile entwasahlobo ngaleyo ndlela inkanuko amagatsha. At the site ngayinye efihlekile akude kwakhiwa ezintsha 2-3, futhi ngenxa yalokho kweminyaka eminingi zingase zimiswe compact isihlahla enhle obukhulu, umqhele obukhulu.
Naphezu kweqiniso lokuthi fir libhekene ukumelana igesi ukungcoliswa komoya, nothuli, nomusi, edolobheni tidzinga inqubo efana dushevanie. Ngamanye amazwi, umqhele kumele ngezikhathi zihlanzwe amanzi. Ngenxa yalokho, izintuli nokungcola is zakhukhula ngenaliti, lesi sitshalo uqala "umoya", ekuthuthukiseni ukubonakala kwawo futhi kunciphisa ingozi Amagciwane. Kungakuhle dushevanie kwenziwe kuze kube izikhathi 5 ngenyanga.
Lesi sitshalo utshalwe utshani ngemuva, ekutshaleni e soliternyh nokwenziwa kwayo nabanye izitshalo coniferous kanye lezihlahla. Kubukeka umbukwane ngokuhlanganyela Abies concolor, Douglas, Juniperus Sabina, ngesihlahla sonwele saseYurophu emi-Serbian.
Kukhona cultivars eziningi zalolu hlobo, senzelwe ahlukahlukene ngobukhulu iziza - kusukela amapaki edolobheni ukuze izindawo elakhelene futhi izingadi phambi. Ethandwa kakhulu kuba sonwele oluhlabayo "glaucoma" (blue-grey), okuyinto ihlukile core izinaliti esiluhlaza umbala ayishintshi unyaka wonke. Lena isitshalo elihle kakhulu edolobheni, emelanayo intuthu, uthuli, ukungcola, isomiso, imimoya enamandla kanye frost. amagatsha awo ingangqubuzani ebusika futhi musa deform ngaphansi isisindo iqhwa ezimanzi, futhi entwasahlobo musa uhlushwa yilanga. Sithole izinhlobo eziningi isigaba, kuhlanganise eyindilinga ( «Glauca Globosa»). Lo muthi compact, esimweni omdala ifinyelela ukuphakama 1 m nokuba ububanzi 1.5 m. Simila ku encane izingxenye, ngisho iziqukathi futhi balcony. Kubukeka iqembu olubabazeka kakhulu zezihlahla otshanini phansi.
Kabanzi ezisetshenziselwa ukwakha izinhlobo oluhlaza «Argentea», «Hoopsii», «Montgomery», «Oldenburg» nabanye abaningi. Ihlangene futhi lisakazeka, yemifino kanye omkhulu, columnar, eyindilinga, pyramidal, nge izinaliti ogqamile, silvery, bluish noma segolide - they are bonke bo khe sizakala. Ngesihlahla sonwele saseYurophu emi cultivars oluhlabayo eziningi ukuze ukwazi cishe ukuhlela ingadi, usebenzisa kuphela lezi zitshalo. Futhi uma ngisho nangemva kweminyaka 10 edlule, kuphela abanikazi izindawo ezinkulu ayenamandla okukwenza lokhu isihlahla ngenxa yobukhulu balo umxhwele, manje ngisho obuncane kwezwe kuze kube nehhovisi ledolobha ungakwazi ukuhlobisa fir - izitshalo Ornamental, okuyinto vele cishe eyikhulu ophilayo eduze indoda .
Izihlahla apula izihlahla entwasahlobo: Amathiphu balimi
Indlela sikhule i apula kusuka imbewu? Ukutshala kanye Ukunakekela
Indlela sikhule ukwatapheya - amacebiso awusizo
Ibhali ezinomhlwenga: isici, betshala nokunakekela
Anthurium futhi Spathiphyllum: incazelo, ukunakekelwa ekhaya. Kungenzeka yini ukubeka ndawonye Spathiphyllum futhi Anthurium
Garden izimbali. Rudbeckia: amafomu, izithombe, ukutshala nokunakekela
Ngiyakwazi ukushayela ngaphandle kwe-T-shirt: imithetho yabashayeli
Siphatha iziyaluyalu ebuchosheni ngosizo ukulungiselela 'Cortexin': ukufundiswa usizo isicelo.
Biography Tchaikovsky kafushane
Yini ukondla izinyoni ebusika. Yini ukondla izinyoni e emgwaqweni ebusika
Yiziphi izilimi ezisemqoka nezasetshenziswa?
Ukuhambisana kwe plasterboard izindonga
Kungakanani ubisi inkomo inika usuku, futhi othinta isivuno ubisi
Khweza i ithawula ukufudumala. Insimbi iziqobosho steel. Izindlela lokukhuphula le ukufudumala ithawula
Popular Amahhotela Azov
Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe ukususa umlayezo "VC": isitatimende
Indlela yokwenza bese unamathisela emashalofini odongeni ngezandla zakhe